६ लक्षण, जसले मुटु कमजोर भएको संकेत गर्छ - अनलाइन डिजिटल समाचार : Shreepage TV
श्रीपेज २८ भाद्र २०७८
६ लक्षण, जसले मुटु कमजोर भएको संकेत गर्छ
पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा मुटुसम्बन्धी समस्याबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या संसारभर बढ्दो मात्रामा छ । हृदयघात लगायत अन्य मुटुजन्य समस्याहरु पहिलेपहिले बढी उमेरका मान्छेमा धेरै हुने गर्दथ्यो । तर हिजोआज ३५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरुमा समेत हृदयघात र मुटुसम्बन्धी समस्या देख्ने गरिएको छ । यी सबै समस्याको कारण हाम्रो आहार, जीवनशैली र परिवारमा पहिले नै भएको मुटुसम्बन्धी जेनेटिक समस्या हो । खाना सम्बन्धी अनुशासन नहुनु र नराम्रो बानीका कारण मुटु कमजोर हुन्छ । जब मुटु कमजोर हुन्छ शरीरमा रक्त परिसञ्चरणको काम प्रभावित हुन्छ । जसको कारण धेरै समस्याहरु आउँछन् । मुटुको कमजोरी सम्बन्धी समस्याबाट बच्नु महत्वपूर्ण छ ।
मुटु कमजोर हुनुको लक्षणहरु
मुटुको मांसपेशी कमजोर हुनुलाई मुटुको कमजोरी भनिन्छ । मुटुको मांसपेशी कमजोरीले धेरै रोगहरु, आहार र शरीरमा हुने जीवनशैलीका कारण हुन सक्छ । यस समस्याको कारणले तपाईं धेरै गम्भीर परिस्थितिहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कमजोर मुटु वा कमजोर मुटुको मांसपेशीले तपाईंलाई गम्भीर मुटु रोगको जोखिममा राख्छ । मुटु कमजोर बन्ने मुख्य लक्षणहरु निम्नानुसार छन् ।
१. लगातार बान्ता र छातीमा हुने जलन
मुटु कमजोर हुँदा शरीरमा धेरै लक्षणहरु देखा पर्छन् । जब मुटु कमजोर हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति निरन्तर वान्ता भइरहने समस्याबाट ग्रस्त हुन्थ्यो । योसँगै, छातीमा लगातार जलन हुनु पनि मुटुको कमजोरीको एक संकेत हो । यदि तपाईं लामो समयका लागि यी समस्याहरु भोग्दै आउनु भएको छ भने चिकित्सकलाई देखाइहाल्नु उचित हुन्छ ।
२. उच्च रक्तचाप
मुटु कमजोर हुँदा रक्तचाप पनि अनियन्त्रित हुन्छ । यदि मुटु कमजोर छ भने मान्छेमा उच्च रक्तचापको समस्या हुन सक्छ । उच्च रक्तचापको समस्याको कारणले त्यहाँ हृदयघात जस्तै समस्याहरुको जोखिम छ । आजको समयमा, रक्तचाप मापन गर्न मेशिन सजिलै उपलब्ध हुन्छ । तपाईं डिजिटल मेसिनसँग तपाईंको रक्तचापको जाँच गर्न सक्नुहुन्छ ।
३. काँध र छाती दुख्ने
कमजोर मुटु हुँदा मान्छेको छातीमा सबैभन्दा धेरै दुखाइ हुने गर्छ । यस्तो दुखाइ विशेषगरी बायाँ छातीमा हुन्छ । यो दुखाइ मुटुको मांसपेशीमा एक समस्याको कारण बनेको छ । मुटुको कमजोरीका कारण कहिले छाती दुख्ने त कहिले अनियमित रगत प्रवाहको समस्या देखिन्छ । सामान्यतया काँधको दुखाइको सम्बन्ध मुटुसँग छैन । तर काँधमा हुने लगातारको दुखाइ कमजोर मुटुको एक संकेत हुन सक्छ ।
४. निद्रा समस्याहरु
निद्रामा हुने समस्या, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता कारणले रिंगटा लाग्न सक्छ । यो समस्या सिधै मुटुको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ । तपाईंलाई मुटुको कमजोरीले पनि रिंगटा लाग्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा सुतिरहेको बेलामा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, मुटुको समस्याको यो एउटा संकेत हो ।
तसर्थ, तपाईं निश्चित रूपमा तपाईंको मुटुको स्वास्थ्यको जाँच गर्नुपर्छ ।
५. छातीमा दबावको महसुस
छातीमा बेचैनी र दबाब महसुस हुनु पनि मुटुको कमजोरीसँग जोडिएको विषय हो । मुटुको धमनीहरु अवरुद्ध भएपछि छातीमा दबाब महसुस हुन्छ र यो अवस्थालाई चिकित्साशास्त्रमा आपतकाल मानिन्छ । जब मुटु कमजोर हुन्छ, एक व्यक्तिलाई अक्सर बेचैनी र छातीमा दबाब महसुस हुन्छ ।
६ लगातार चिसो र फ्लू
चिसोको समस्या लामो समयसम्म देखिनु पनि मुटु रोगको एक संकेत हो । लामो समयसम्म चिसोको समस्या र यसको कारण कफ जम्मा हुनु एक गम्भीर समस्याको एक संकेत हुन सक्छ । यदि मुटु कमजोर छ भने तपाईंलाई यो समस्या हुन सक्छ ।
कसरी छान्ने सुरक्षित हेल्मेट ?
प्रहरी हुँ भन्दै धम्क्याएर पैसा असुल्ने तीनजना पक्राउ
समयमै मापदण्डअनुसार सडक निर्माण सक्न निर्देशन
राउटे बस्ती व्यवस्थित बसाेबास लागि पहल गरिने